November 25, 2021 - Amawpyay
ဝဋ်​​ကြွေး​ကြောက်​ရင်​ နှုတ်ကို သတိထား တချို့လူတွေ ပြောကြတဲ့ စကား ရှိတယ်။ သူများ အပေါ် မဟုတ်တာ မလုပ်ဘူး မကောင်းမကြံဘူး။ နှုတ်ကြမ်းတာ ဘာဖြစ် လည်း။ မှန်ပါတယ် နှုတ်ကြမ်း လို့သူ တစ်ပါး က ဖြစ် ခြင်မှ ဖြစ်မှာပါ။ ဖြစ် တာ ခံ ရ တာ က ကိုယ် ပါ။ မြတ်စွာဘုရား လက်ထက်က အဗ္ဗပါလီပြည့်တန်ဆာမက ရုပ်ရည်လှပလို့ ဟိုမင်းက လိုချင် ဒီမင်းက ရချင်နဲ့ သူ့ကြောင့် စစ်ဖြစ်မှာ စိုးလို့ အများပိုင် အဖြစ် ပြည့်တန်ဆာ မလုပ်ဖို့ ဖြစ်ခဲ့ရတာဟာ စိတ်ထားညံ့လို့ စေတနာ နည်းလို့ …
အမျိုးသမီးတိုင်း သိချင်ကြတဲ့ ဘာလို့ ရာသီသွေးတွေ အများကြီးဆင်းနေရတာလဲ
အမျိုးသမီးတိုင်း သိချင်ကြတဲ့ ဘာလို့ ရာသီသွေးတွေ အများကြီးဆင်းနေရတာလဲ ဒါက အမျိုးသမီးတိုင်း သိချင်ကြ တဲ့ မေးခွန်း ပါပဲ။ ရာသီလာတဲ့အချိန်တိုင်း တစ်ကိုယ်လုံးက သွေးတွေ ခမ်းသွားမလားတောင် ထင်ရတယ်။ ဆင်းလိုက်တဲ့သွေးတွေ ဆိုတာ၊ လဲလိုက်ရတဲ့ pad ဆိုတာလည်း မနည်းမနောပါပဲလား၊ တချို့က ရာသီစလာတဲ့ရက်မို့လို့ အများကြီး ဆင်းတယ်။ ပြီးရင် နည်းသွားတယ်။ တချို့ကလည်း နေ့တိုင်း အများကြီးကို ဆင်းနေတာ၊ ဆချို့က ဟိုအရင် ရာသီစလာတည်းက ဒီလိုပဲ အများကြီး ဆင်းနေတာ။ တချို့ကျတော့ အရင်က အဲ့ဒီလောက် မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလပိုင်းအတွင်းမှာမှ အရင်ကထက် ပိုများလာတာ။ ဟုတ်ကြလား လေဒီတို့..၊ ဒါတွေဟာ ဘာကြောင့်လဲ။ ပုံမှန်ပဲလား။ …
လူသိနဲသေးတဲ့ ငရံ့ပတူရဲ့အကျိုးပြုဆေးနည်း ငရံ့ပတူရဲ့အကျိုးပြုဆေးနည်း လူပျိုနာ ပန်းသေ ပန်းညှိူးရောဂါ အတွက် စိတ်ပင်ပန်း၊လူပင်ပန်း အင်အားကုန်ခမ်းသူတို့အတွက် အလွန်အားထား ရသော အပင်ဖြစ်သည်။ အရွက် ကိုပြုတ်ပြီး ကြက်သွန်ဖြူ၊ကြက်သွန်နီ၊ ပုဇွန်ခြောက်ဖြင့် အားပါးတရ သုပ်စားပေးပြီး၊ ငရံ့ပတူ အမြစ်ကို နှမ်းဆီလေးဖြင့် သွေးပြီး ခန္ဓာကိုယ် အနှံ့လိမ်း ကျံပေး ပါက သိသိသာသာ လန်းဆန်း စေကာ အင်အားသစ်တို့ ရရှိစေ ပါသည်။ ခါးသက်သော အရသာ ရှိပါသည်။ အဆုပ်နာနှင့်ငရံ့ပတူ အဆုပ်နာ သူတို့ ငရံ့ပတူရွက် သတ္တုရည်နှင့် ဂျင်းသတ္တုရည်ကို ထမင်းစားဇွန်း(၁)ဇွန်းစီရောစပ်ပြီး သောက်ပေးခြင်း၊ ရင်နှင့် ကျောပြင်အား အမြစ်နှင့် ဂျင်းခြောက်သွေး ကာလူးပေးပါက အဆုပ်နာသူတို့ သက်သာပျောက်ကင်းစေ …
ဒူးနာအတွက် အစွမ်းထက်တဲ့ သဘာဝ ဆေးနည်းမျာ
ဒူးနာအတွက် အစွမ်းထက်တဲ့ သဘာဝ ဆေးနည်းမျာ ရှယ်ပြီး သိမ်းထားသင့်တဲ့ဆေးနည်းလေးတွေပါ ။ ဒူးနာ၍ ဆေးခန်းပြသော်လည်း မသက်သာပဲ သဘာဝဆေးနည်း များကို တောင်းဆို လာသူများ အတွက် ဒူးနာဆေးနည်းများကို စုစည်း၍ မျှဝေပေး လိုက်ပါ တယ်။ (၁) လေဖြတ် လေငန်းလေးဘက်နာ ခါးနာ ဒူးနာအရောဂါများအတွက် ဖီးကြမ်းငှက်ပျောသီး အမှည့်ကို ဖင်ဖြတ် ခေါင်းဖြတ်၍ သက်ရင်းကြီးရွက်နှင့် လုံအောင်လိပ်ကာ ( ၅ ) နာရီခန့် ပြုတ်၍ တစ်နေ့သုံး လုံးစီ ( ၅ ) ရက်ဆက်တိုက် စားပေး ပါက လေဖြတ် လေငန်းလေး ဘက်နာ ခါးနာ ဒူးနာနာ တာရှည်ရောဂါများ …
ဆင်ဂယ်ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို တစ်ချို့က အထီးကျန်ခြင်းတဲ့…..လုံးဝမှားပါတယ်ဖတ်ကြည့်ပါ
ဆင်ဂယ်ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို တစ်ချို့က အထီးကျန်ခြင်းတဲ့…..လုံးဝမှားပါတယ်ဖတ်ကြည့်ပါ အချစ်တွေကို ငြင်းပယ်ပြီး ဆင်ဂယ် ဘဝကို ဂုဏ်ယူစွာ လက်ခံ ထားကြတဲ့ သူတွေရဲ့ ခံယူချက်များ ဆင်ဂယ်ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို တစ်ချို့က အထီးကျန်ခြင်းနဲ့ တွဲမြင် တတ်ကြ ပါတယ်။ တကယ်တမ်း မှာတော့ ဒါဟာ မှားယွင်းတဲ့ ထင်မြင် ယူဆချက် တစ်ခုမျှ သာဖြစ်ပြီး ဆင်ဂယ်ဖြစ်နေရ တိုင်းလည်း၊ ချစ်သူ မရှိတိုင်းလည်း အထီး ကျန်ခြင်းကို ခံစားနေရတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အထီးကျန်းခြင်း၊ မကျန်ခြင်းဆိုတာက ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နဲ့ပဲ အားလုံး သက်ဆိုင်နေပါတယ်။ တကယ်တော့ ဆင်ဂယ် ဘဝကို ဂုဏ်ယူစွာ လက်ခံ ထားကြ တဲ့ မိန်းကလေးတွေ ဆီမှာတော့ …
ဝက်ခြံအတွက်အသုံးပြုသင့်သော အရေပြားထိန်းသိမ်းပေးသည့် ပစ္စည်းများ။
ဝက်ခြံအတွက်အသုံးပြုသင့်သော အရေပြားထိန်းသိမ်းပေးသည့် ပစ္စည်းများ။ လူတိုင်းကြည့်ကောင်း ချင်ကြ သည် လှချင်ကြ သည် ချည်းဖြစ် သည်။ နေ့စဉ်သုံး အသားရေထိန်းပစ္စည်းများက သင့် အသားရေကို အဆီပြန်ခြင်းလျှော့ ချခြင်း၊ ချွေးပေါက်များကို သန့်စင်ပေး ခြင်းနှင့် ဝက်ခြံများကို သက်သာစေခြင်း၊ ကာကွယ်ပေးခြင်း စသည်တို့ ဖြင့်များစွာ အထောက်အကူပြု နိုင်ပါ သည်။ ဝက်ခြံမဖြစ်အောင်ထိန်းသိမ်းရာတွင် အချိန်သိပ်ပေးရန် မလိုသလို ဈေးကြီးသော ပစ္စည်းများ ကိုသာ အသုံးပြုရန် လည်း မလိုပါ။ အောက်ပါ နည်းလမ်း များသည် သင့် အ တွက် သန့်စင်ကြည် လင်သော အသားရေကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ရန် ကူညီပေး လိမ့် မည် ။ …
ဒူလာသွေးဝမ်းအတွက် ရှားပါးဆေးနည်း “သွေးဝမ်းအတွက် နဂါးစက်(မြွေနိုင်ပင်)” “မင်းကြည့်ရတာ ဖြူဖတ်ဖြူရော် နဲ့ကွာ” “ဟုတ်တယ် ဆရာကြီး” “ကျွန်တော်သွေး ၀မ်းသွားတာ(၂)ရက် ရှိနေပြီ” “ဒါများကွာ…ငါကုတတ် ပါတယ်” “ငါတို့ အဘိုး လက်ဆင့် ကမ်းပေးခဲ့ တဲ့ဆေးနည်းအမွေကွ” နဂါးစက်ဥ ကိုရေစင်အောင်ဆေးေ စပြီး ဓါးဖြင့် လှီး၍ ထန်းလျက်(၅)ခဲဖြင့် ရေမတ်ခွက်(၃)ခွက်ထည့်ကာ (၁) ခွက်စာကျန်သည် အထိပြုတ်ရည်ကို တိုက်ပေး ရခြင်းဖြစ် သည်။ နံနက်တစ်ခွက်ည တစ်ခွက်သောက် ပေးက မုချပျောက် ပါသည်။ ဒူလာသွေး ၀မ်းဖြစ်သူတို့အတွက် အလွန်အစွမ်း ထက်သောကြောင့် (၂)ရက်(၃)ရက် ဆက်သောက် သင့်ပါသည်။ “ဒူလာသွေး ၀မ်းနဂါးဖမ်း” ဟုမှတ်သား ရသည် ဆို …
ငွေဝင်လာဘ်ရွှင် ယတြာ အစီအရင်
ငွေဝင်လာဘ်ရွှင် ယတြာ အစီအရင် ငွေကြေး လာဘ်အလွန် တိတ်နေခြင်း ရှာသမျှ ပြန်ကုန် နေခြင်း ကြွေးငွေရ စရာများ မရခြင်း ပေးစရာများမပေးနိုင်ခြင်း စသော ငွေကြေးအခက်အခဲ များအတွက် သုံးနိုင် ပါတယ်။ 1. တနင်္ဂနွေ သားသမီးများ သောကြာနေ့ မနက် ၉နာရီတွင် ရွှေထီး ၅လက်လှူပါ။ 2. တနင်္လာ သားသမီးများ စနေ့မနက် ၉နာရီတွင် ရွှေထီး ၁၂လက် လှူပါ။ 3. အင်္ဂါ သားသမီးများ တနင်္ဂနွေနေ့ မနက် ၉နာရီတွင် ရွှေထီး ၇လက် လှူပါ။ 4. ဗုဒ္ဓဟူး သားသမီးများ တနင်္လာနေ့ မနက် ၉နာရီတွင် ရွှေထီး …
အနာအဆာပါတိုင်း တန်ဖိုးမဲ့တယ်ဆိုရင် ဆန်ထဲ ကြွက်ချေး ပါလာရင် ဆန်အကုန်လုံးကို သွန်ပစ်မယ့် အစား ကြွက်ချေးကို ဖယ်စား သင့်တယ် အနာပါတဲ့ ငှက်ပျောသီးတစ်လုံးက ဆာလောင် ငတ်မွတ်နေသူ အဖို့ကတော့ အနာဖယ်ပီးစား တတ်ရင် အာဟာရ ဖြစ်မယ်။ ထို့အတူပါပဲ လူ့လောကမှာ လူလူချင်းပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးမှာ အားနည်းချက် ရှိသူ အချင်းချင်း အပြစ်အနာ အဆာတွေကို အပြန်အလှန်ဖေးမ တည့်မတ်ရင်း အနာ အဆာ ကို ဖယ်ပီးပေါင်းသင်း တတ်သွားရင် အမြင်ကျယ်ပီး ရင့်ကျက်တဲ့ လူတွေဖြစ် လာမှာ ပါ။ အမြင်မတူ ပေမယ့် နှလုံးသား တူရင်သွေးမတော် သားမစပ် သူစိမ်းတွေ တောင် လင်နှင့်မယား ဆိုတာ ဖြစ်လာကြ …
ညဖက်မှာ ရေချိုးရင် ဘာဖြစ်မလဲ? သိပ်ကောင်းတဲ့စာလေးပါ
ညဖက်မှာ ရေချိုးရင် ဘာဖြစ်မလဲ? သိပ်ကောင်းတဲ့စာလေးပါ လူတိုင်းလိုလို ကိုယ်ခန္ဓာ နုပျိုလန်းဆန်းနေ တာကို အလိုရှိကြ ပါတယ်။ ရေချိုးခြင်းဟာလဲ ခန္ဓာကိုယ် လန်းဆန်း သွားအောင် လုပ်ဆောင်ခြင်းထဲမှ တမျိုး အပါအဝင်ဖြစ် ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ညဖက်ပိုင်းမှာ ရေချိုးခြင်းဟာ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်သလား ဆိုတာကို လေ့လာကြည့် ရအောင်ပါ။ ရေချိုးခြင်းဟာ ကိုယ်ခန္ဓာအပန်းပြေသွားအောင် အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ တနေကုန် အလုပ်ထဲမှာ စိတ်ရော ကိုယ်ပါ ပင်ပန်းလာခဲ့တဲ့အတွက် ညနေဖက်မှာ သင့်ရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာဟာ ပြန်လည် လန်ဆန်းဖို့ တခုခု လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ် ပါတယ်။ ညပိုင်းမှာ ရေချိုးလိုက်ခြင်းဖြင့် သင့်ရဲ့စိတ်ပိုင်း ဆိုင်ရာနဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာခံနိုင်စွမ်းရည်အားကို ပြန်လည်မြှင့်တက်စေပါတယ် ညပိုင်းမှာ …